Luis Eduardo Montás kwuru, si, “Ụjọ Atụghị M Izi Ndị Mmadụ Ozi Ọma” | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
A MỤRỤ YA n’AFỌ 1906
E MERE YA BAPTIZIM n’AFỌ 1947
ONYE Ọ BỤ Ọ nọbu n’ọkwá ukwu n’òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị Rafael Trujillo nọ na ya. O mechara bata n’ọgbakọ ma fee Jehova ruo mgbe ọ nwụrụ n’afọ 2000.
LUIS bụ onye ikwu Trujillo. Ọ bụkwa ya na-ejidere òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị Trujillo nọ na ya ego. Ma, otú Trujillo si achị adịghị ya mma. N’ihi ya, ọ gbalịrị ugboro ugboro ka ọ gbaa arụkwaghịm, ma Trujillo jụwara isi.
Mgbe Trujillo gburu ụmụnne Luis abụọ, Luis gbara mbọ ugboro abụọ ka o gbuo Trujillo. Ma, o nweghị mgbe ọ bụla a kpọrọ ya aha na o so kpaa nkata igbu Trujillo. Luis gadịrị na nke ndị dibịa ka ha gbuoro ya Trujillo. Ọ gwara ha, sị: “Ọ na-akpa àgwà ka anụmanụ, ọ na-emekwa ka à ga-asị na o nweghị onye ya na ya hà.” Mgbe Luis gara na nke otu n’ime ndị dibịa ahụ, ọ hụrụ akwụkwọ “The Truth Shall Make You Free” n’elu tebụl ma bido ịgụ ya. Otú akwụkwọ ahụ si na-atọ Luis ụtọ mere ka o were ya laa. O mechakwara kwuo na okpukpe nwe akwụkwọ a na-akụzi eziokwu ya nọ na-achọ ịmụta.
Mgbe Luis gara Kiudad Trujilo, ọ gara ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova. Ha nyekwara ya magazin na akwụkwọ anyị ndị ọzọ. O ji abalị ahụ dum gụọ akwụkwọ ndị ahụ, mechaakwa kwuo ka a mụwara ya Baịbụl. Ka ọ na-amụtakwu ihe na Baịbụl, ọ hapụrụ ọchịchị Trujillo. Mgbe Trujillo matara na aka ya adịkwaghị n’ọchịchị ya, ọ gwara ya na ọ ga-eziga ya Puweto Riko ka ọ na-anọchite anya obodo ha. Luis ekweghị anara ya ọrụ ahụ, n’agbanyeghị na ọ ma na o nwere ike ịkpatara ya nsogbu.
Luis kwuru, sị: “O nweghị ụdị ihe a na-emeghị m. Ha nyekwara m ọkwá dị iche iche ka m gbanwee obi m. Ma, ekpebiela m na e nwekwaghị ihe jikọrọ mụ na ọchịchị ụwa a.” Luis bịara ghọọ ezigbo onye nkwusa nke na ndị ụkọchukwu Katọlik nọ n’obodo ya na-akpọ ya “onye ozi ọma.” E mere ya baptizim n’abalị ise n’ọnwa Ọktoba, afọ 1947, ya bụ, ọnwa isii ọ gara ọmụmụ ihe mbụ ya.
Mgbe Luis mechara baptizim, ndị ọchịchị jidere ya, tụọ ya mkpọrọ, ma kpọga ya n’ọnụ ụlọ mkpọrọ naanị ya ga-anọ. E nwekwara oge ndị a chọrọ igbu ya. Ma, mgbe ọ bụla e jidere ya kpụpụ ya n’ụlọikpe, ọ na-eji ohere ahụ ezi ndị nọ n’ụlọikpe ozi ọma. O kwudịrị, sị: “Ụjọ atụghị m izi ndị mmadụ ozi ọma. Ọ na-abụ m cheta otú m si mee ya, obi atọọ m ụtọ.”
Ndị obodo Nwanna Luis ma na ọ bụ ezigbo Onyeàmà Jehova. Ọ bụ ya mere na n’afọ 1994, otu akwụkwọ akụkọ a na-ebipụta na Dọminikan Ripọblik dere banyere ya, sị: “Ndị San Kristobal ma Maazi Luis Eduardo Montás ka onye na-eji ihe akpọrọ ihe. Ụdị mmadụ ya dị ụkọ. Ihe banyere ndị ọzọ na-emetụ ya n’obi. Ọ dịkwa umeala n’obi. Ihe e ji mara ya karịchaa na San Kristobal bụ na ọ na-ezi ndị mmadụ ozi ọma.”